लकडाउन भरि कसरी समय बिताउने भनेर चिन्तामा हुनु हुन्छ ? ‘मुड फ्रेस’ गर्ने अप्नाउनुहाेस यी कार्य ! – Samacharpati
काठमान्डाैँ, १२ चैत । आजसम्म विश्वभरी ३९२,००० भन्दा बढी मानिसहरू कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भइसकेका छन् । नेपालमा पनि कतारबाट आएकी एक महिलामा यसको संक्रमण भएको देखिएपछि नेपालमा पनि यसको लागि उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ ।
यही घातक भाइरसको डरले स्कूल, कलेज र कार्यालयहरू सबै बन्द गरिएका छन्। सरकारले मानिसहरूलाई घरभित्र नै लकडाउन गर्ने बताउँदै आएको छ । घरभित्र नै बस्नुपर्दा यसले धेरै मानिसहरुमा तनाव (मानसिक तनाव) को समस्या बढ्दै जानसक्छ ।
सरकारले नै अर्को सोमबारसम्मको लागि घरबाट बाहिर ननिस्कनको लागि आग्रह गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सम्भावित समस्याबाट बच्नको लागि के गर्ने ?
संगीत, पढाई वा चित्रकालाको विकास
यदि तपाईं एक्लै भएको महसुस गर्नुहुन्छ भने मानसिक उदासिनताले झनै स्वास्थ्य समस्या गराउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा आफूलाई म पर्ने कुरा पढ्न सकिन्छ । आफ्नो लेखनलाई सुधार्न सकिन्छ । यदि रहर छ भने हामी आफूलाई मन लागेको कुरा पेन्टिङ गरेर बस्न सक्छौं वा हामी मनपर्ने संगीत पनि सुन्न सक्छौं ।
मानिसहरू जो निद्रामा सम्झौता गर्दछन् त्यसले उनीहरूको स्वास्थ्यलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउँछ । निन्द्राअभावका कारण मानिसहरू विभिन्न शारीरिक र मानसिक रोगबाट ग्रसित हुन्छन् । यदि तपाईं राम्ररी सुत्नुभयो भने शरीरको उर्जा दिनभरीका लागि रहनेछ । साथै, तपाईं आफ्नो काम ठिकसँग गर्न सक्षम हुनुहुनेछ र तपाईंको मुड पहिले भन्दा राम्रो हुनेछ । सामान्यतया ७ देखि ९ घण्टासम्म सुत्नु शरीरको लागि आवश्यक मानिन्छ ।
हेमजामा निःशुल्क आखाँ शिबिर सम्पन्न